R.W Canada: Waxaan heynaa xog ku saabsan in diyaaradii dhacday lasoo riday. - NorSom News
R.W Canada: Waxaan heynaa xog ku saabsan in diyaaradii dhacday lasoo riday.
Saraakiisha Dowladda Mareykanka ayaa sheegaya in diyaaradda Ukrainian International Airlines, oo nooceedu ahaa Boeing 737-800, uu ku dhacay gantaal, sida ay tabisay warbaahinta CBS.
Dowladda Ukraine ayaa goor sii horreysay sheegtay inay baaritaan ku heyso sababtii ay u dhacday diyaaradda iyo in uu soo riday gantaal.
Warbaahinta CBS oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay in qalabka satellite ee hawada uu qabtay caddeymo muujinaya in diyaaradda uu gantaal ku dhacay.
Dhinaca kale, barnaamijka Newsweek oo soo xigtay saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga iyo sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan sirdoonka Ciraaq ayaa sheegaya in diyaaradda Ukraine uu haleelay gantaal lagu farsameeyay dalka Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay “inuu shaki ka qabay” sababta ay diyaaraddaas usoo dhacday, wuxuuna yiri: “Qof ayaa laga yaabaa inuu khalad sameeyay”.
Haseyeeshee Iiraan ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada in gantaal uu ku dhacay diyaaraddaas, waxayna sheegtay in eedeymahaas ay yihiin dagaal maskaxeed oo ka dhan Iran.
Previous articleLacagta ganaaxa goynta balanta isbitaalka oo 50% kor loo qaaday.
Next articleTV-ga CNN oo 2,4 bilyan magdhow ah kula heshiiyay wiil ay muuqaal qaldan ka gudbiyeen.